BBC Learning English - Course: English Expressions - Afaan Oromoo / Unit 1 / Session 10 / Activity 1
2. Does Rob think preparing properly is important?
Yooyyaa, qophii jechoota Afaan Inglizii keessaatti of ibsuuf si fayyadan English Expressions akkasumas haara ta’n akka bartuuf si gargaarutti baga nagana dhufte. Har’a, Afaan Inglizii keessattii of ibsuuf kan si fayyadu ‘to brush over’ ‘irra dibuu’ jedhu ni barana. Maal jechuudha jette yaada? Wal’aaltee? Tole ittifufii caqasi. Haasawa Robifi Lii gidduutti taasifame haacaqasnu. Roob isuudioo dibuunsaa maalii yaada gaarii ta’ee Liitti hinmul’anne laata?
Istuudiyoo diibuusaatiin mormii Liin dhiheessitee Rob akkamitti ilaala mee haa hubbannu.
Rob istuudiyichi ‘scruffy’ balfamaa jedhee yaada; kanaafuu ‘tidy’ qulqulleessuu fi ‘paint’ dibuu barbaada. Liin, kun yaada gaariidha jettee hinyaadu. Maaliif akka ta’e hubachuuf caqasi.
Rob yeroo haallu dibu ofirattii fi afaa lafa jirurratti gadi naqa jette Liin yaaddofteetti. Haa ta’u malee Rob ‘to brush over’ itti fufaarra. ‘Brush over’ jechoota lama irra ijaarame ‘brush’ fi ‘over’. ‘Over’ irraa ‘brush’ immoo dibuu ibsa. Wayita waan tokko 'brush over' gootu waantokkoof xiyyeefanna hinkennine ykn akka dhimma cimaatti hinilaaltu jechuudha. Akkasumas waan tokko irra keessa malee gadi fageenyaan ilaaluu dhabuudha. Waanti kun garuu yeroo mara hiika sirri hintaane qabaachuu danda’a. Rob wayita istuudiyoo dibu waa hedda laaquu waan danda’uuf tarii xiyyeeffannoo gochuu dhabuun isarra hinturre. Jechoota of ibsuuf nu fayyadan akkamitti akka fayyadaman fakkenyawwan muraasa haa caqasnu.
I really need a new phone, I might buy one this weekend.
Rob waanuma dibduu biteef bakka hundaa waan dibuu barbaade fakkaata. 'Brushing over things' yeroo qusachuun si gargaaru danda’a, garuu Rob tarii ofeeggannoo muraasa taasisuun irra ture. Atihoo? Wantota akkamii irra debdee jirta? Wantotarra irra dibuun rakkoowwan sitti fide jiraa?
Jechoota Afaan Ingliziin of ibsuuf si fayyadan English Expressions dabalataaf yeroo itti aanu walitti deebina.
Max is very private. He never talks about his personal life - he just brushes over it when you ask him.
Jecha kana yeroo mara jecha ‘brush’ jedhu booda fayyadamuu qabna.
Gaaleen kun wanta tokko xiyyeeffannaa lagachuu ykn sirriin ittiyaaduu dhiisuu jechuu akka ta’e yaadadhu.
Kun waa’ee haalawwan waliigalaati. Kanaafuu gaalee waa’ee haalawwan waliigalaa himu fayyadamuu qabna.